Rehefa Manomboka Miteny Ireo Vahoaka Tsy Manan-kialofana Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Rehefa Manomboka Miteny Ireo Vahoaka Tsy Manan-kialofana Ao Rosia
Voadika ny 06 Oktobra 2016 2:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, Ελληνικά, Magyar, 日本語, Español, English
Anastasia Ryabtseva. Sary : Vkontakte
Fony i Anastasia Ryabtseva nanandrana voalohany nitafa tamin'ireo olona tsy manana fialofana ao St. Petersburg, marobe no nandà tsy nety hiresaka taminy. Amin'ny maha-mpanao gazety azy, taitra taminy ny olona, izay avy hatrany dia niahiahy momba ny fomba nitsongàn'ilay mpanangona vaovao azy ireo. Niova anefa izany rehefa nanomboka nanolotra ny tenany ho toy ny mpirotsaka an-tsitrapo mpandrindra ny toeram-pialofan'ireo tsy manan-kialofana ao Nochlezhka, toerana niasàny nandritry ny taona roa izy.
Mitafa amin'ireo olona tsy manan-kialofana ao St. Petersburg i Ryabtseva ary manangona ireo tantara avy amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ireo toerana fialofana. Ho fanampin'ny asany miaraka amin'ny toeram-pialofana Nochlezhka, manampy tsindraindray ao amin'ny “Night-Bus” ihany koa izy— toeram-pisakafoanana misy kodiarana, mandehandeha manome sakafo etsy sy eroa ao an-tanàna.
“Ny zavatra tsapanao voalohany dia hoe tsy manana antony tokony hitarainanao ianao, satria ireo olona tonga manatona anay hitady sakafo mbola mafy kokoa ny mahazo azy,” hoy i Ryabtseva tamin'ny RuNet Echo. “Faharoa, ianao mandray volabe sy fankasitrahana ho setrin'izany. Fa tena zavatra mahagaga ny fahatsapanao fisaorana avy any am-po, efa ho am-polony, ao anatin'ny hariva iray.”
Ryabtseva dia mitantana tranonkala iray antsoina hoe “Hadalàn-dry Zareo ny Azy,” toerana amoahany ireo tantara azony avy amin'ireo olona tsy manan-kialofana ao an-tanàna sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ilay toeram-pialofana. Tao anatin'ny taona roa, manodidina ny 40 no voaangony tamin'ireny tantara ireny. Ny anaran'ìlay tetikasa dia natao hisintonana ilay toetsaina tsy miraharaha ananan'ny ankamaroan'ny olona momba ireo tsy manan-kialofana.
“Raha vao resaka fiantràna, ny antitra sy ny ankizy no tena maha-vonona ny olona ny hanampy azy”, hoy i Ryabtseva. “Ireo tsy manan-kialofana—miaraka amin'ireo mpiakindoha amin'ny zava-mahadomelina sy ireo marary saina—no olona tena farany indrindra anaty lisitr'ireo tian'ny hafa ho tohanana,” hoy izay manamarika, tamin'ny fanampiana hoe matetika misy fahavononana bebe kokoa handàka ireo olona eny an'arabe fa tsy ny hanome tànana azy. Ao anatin'ny maro amin'ireo tantara nangonin'i Ryabtseva, dia io indrindra no nitranga tamin'ireo olona ireo: lehilahy iray mitsirara eny an'arabe, mijaly, ary tampoka eo misy mpandalo mandaka azy.
Ny Septambra, talohan'ny nanombohany ny tetikasany manokana tety anaty aterineto, navoakan'i Ryabtseva tao amin'ny tranonkala “Takie Dela” (Dia Izay No Miseho) ny sasantsasany tamin'ireo tantara.
Indray mandeha dia efa nisy ny vina hamoaka tao anatin'ny endriny vita printy amin'ilay gazetiboky Rosiana Esquire ireo tafa nataon'i Ryabtseva. Noheverina hiseho tao anatin'ilay “Fitsipi-piainana”, ampahany malaza ao anatin'ilay famoahambaovao ireny tantara ireny.
Saingy tsy tontosa izany. i Ksenia Sokolova, izay nandray an-tànana ilay gazetiboky tamin'ny Aogositra (sady mihazakazaka haka seza iray ao amin'ny parlemanta), tsy nampiseho velively fahalinana amin'ny famoahana ny asan'i Ryabtseva. Na ny imailaka nalefany aza tsy novaliany akory.
Raha sarotra ho azy ny nahita izay hamoaka ny asany, dia milaza i Ryabtseva fa adintsaina henjana maro koa no atrehany rehefa miresaka amin'ny sasany amin'ireo olom-peheziny izy. Ohatra, ny tafa voalohany nifanaovany tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Sergey, izay nahiliky ny fianakaviany hivoaka ny tranony, ary lasa teny an'arabe. Taorian'io fihaonana io, dia lazain'i Ryabtseva fa tsapany ho mitafy mihoatra noho izay mora indrindra eny an-tsena izy, angamba noho ny fieritreretana ny mba hifanaraka kokoa.
Tafa iray hafa lazain'i Ryabtseva fa “faran'izay tena manandanja” ho an'ny tetikasany ny nifanaovany tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Dmitry, mpahay maritrano lasa tsy manan-kialofana ary nandà ny ho alaina sary. Raha ianao no nahita an'i Dmitry teny an'arabe, hoy izy, tsy ho ao an-tsainao velively ny hoe olona tsy manan-kialofana izy. “Raha ny marina dia iray amin'ireo olona tena nahita fianarana nihaonako hatramin'izay izy,” hoy i Ryabtseva. “Nihevitra ny tenako ho toy ny mpianatra iray manoloana profesora aho, rehefa injay izy nitanisa ny Testamenta Taloha sy nilaza tamiko ny filaozofiam-piainany.” Nambaran'i Ryabtseva fa lasa namonjy monastery izy taty aoriana.
Mihevi-tena ho tena tsara vintana i Ryabtseva tamin'ny nahafahany nanangona tantara marobe toy izany. “Nahafantatra zavatra betsaka momba ny tontolo amin'ny ankapobeny aho—ohatra, hoe afaka miova ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Ny fandingànana ny fahasamihafàntsika amin'ny olona dia afaka manova fiainan'olona iray” hoy izy tamin'ny RuNet Echo.
Marobe tamin'ireo olona nitafàn'i Ryabtseva no naneho fisaorana mitafotafo ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'ireo toeram-pialofana manerana an'i St. Petersburg. Andrey Almasov, lehilahy iray 46 taona, mpangalatra taloha, nilaza taminy momba ny niverenan'ny finoany ny olona:
Я даже в голове знать не знал и не мог себе представить, что такие как мы, оказывается, кому-то нужны. Что это их профессия. Я не хочу громких слов говорить, но я здесь в людей поверил.
Tsy noeritreretiko mihitsy sady tsy azoko novinaniana hoe misy olona miahy ny olona toa anay—hoe izany no asan'ny olona sasany. Tsy te-hiteny betsaka aho, fa teo no nanombohako nino olona.
Mbola misy vitsivitsy ireo tantara tsy voavoaka voatahiry any anaty rakitr'i Ryabtseva. Nisy lehilahy iray izay zatra ny niaina an-dalambe saingy efa manana trano indray ankehitriny. “Ankehitriny, hoy izy [miresaka momba ny olona manan-kialofana] hadalàn-dry zareo ny azy,” hoy i Ryabtseva tamin'ny RuNet Echo. “Mihevitra ny tenany ho lehilahy matanjaka izy, ary milaza fa kanosa ireo olona tsy mahavita mamaha ny zava-manjo ny tenany. Angamba izany manampy azy fotsiny hanadino ny olany manokana,” hoy i Ryabtseva.
i Ryabtseva dia mino ny fivoarana miadan'ny toetra andraisana ireo tsy mana-kialofana ao St. Petersburg, ary derainy ho isan'ny tompon'antoka tamin'ny sasany amin'ireo fiovàna ireo ny fanairana ny saina nataon'ny media. Ny toerana fialofana ao Nochlezhka dia voalaza fa mahasarika mpirotsaka an-tsitrapo betsaka, ary mahazo fanampiana tsy azo tsinontsinoavina ihany koa ilay toerana.
“Ny tanjon'ny tetikasa,” hoy i Ryabtseva, “dia ny handrava ireo fitsaratsaram-poana, ka mba hiatoan'ny olona sy hijereny olona iray, raha fahinymety ho tsy niraharaha fotsiny izao ny ‘mpirenireny iray’ ry zareo.’”